ब्राजाकीका दुई गजल
फाल्गुन १२, २०७४ मनु ब्राजाकी
काठमाडौँ — बिर्सिएछु भन्न पनि पाइँदैन ।यस्तो जाबो माया अब लाइँदैन ।भोकसित साटिएको जुठोपुरा,अबदेखि मीठो मानी खाइँदैन ।
बिदाइमा रमाउन थालेको छु,
भेट हुँदा स्वागतगान गाइँदैन।
यौटा कुरा भनुँभन्दा जीवन बित्यो,
त्यही बित्या जीवन फेरि चाहिँदैन।
एकचोटि जन्मेपछि पुगिहाल्यो,
बाराम्बार मर्न अब आइँदैन।
स्वास्नीलाई बेश्या भन्ने लोग्ने को हो?
जन्म दिने तिम्रो आमा भोग्ने को हो?
लोग्नेमान्छे, स्वास्नीमान्छे दुवै मान्छे,
स्वास्नीलाई मान्छे हुन रोक्ने को हो?
नारीको घर भनिँदैन, मानिँदैन,
वेदवाक्य ‘जायेदस्तम्’ घोक्ने को हो?
घर भन्ने खोरभित्र हुर्काएर,
आँसु, पसिना र रगत धोक्ने को हो?
भोग्या ठानी छोरीलाई दान गरी,
भोग्नेलाई ढुंगोसरि ढोग्ने को हो?
(पहिलो पटक यहाँ प्रकाशित यी गजल ब्राजाकीले निधन हुनुभन्दा चार महिनाअघि लेखेका थिए।)
‘पिताजीको अनैतिक चरित्र’
कर्णालीको शिर खोज्दा